Qaybintii NAFSADEED Ee Soomaalida – Maqaal dheer oo gar-naqsi ah | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qaybintii NAFSADEED Ee Soomaalida – Maqaal dheer oo gar-naqsi ah
(Hadalsame) 01 Juun 2021 – Suugaantu waxa ay muujisaa heerka hodantinnimo ee dhaqanka iyo afka ummad walba. Waxa ay qayb weyn ka tahay isku xidhka sooyaalka iyo siiyaalka nololeed iyo taariikheed ee dadkaas. Mar kalena waa dareenka wanaagsan ee dadka isu haya iyo wacyiga wadareed ee lagu qiimaysto wax badan oo garasho iyo dhaqan ah. Labada qof ee isku dadka ah waxa isu soo jiidaa dhiigga uun ma aha ee waa waaya’aragnimada iyo wacyiga wadajirka ah ee ay wadaagaan. Dareenkaa midaysan waxaa ugu weyn ee beeraa waa fanka iyo suugaanta oo ah ruuxda bulsho ku nooshahay.
Dooddii Deelley kooxda dhinaca mucaaradnimada ka taagani haddii ay soomaali oo dhan ahayd, dhinaca kale niman isku hayb ah baa caddaysatay Dawladdu in ay tahay toodii, tii tolkooda, sidaa darteed ay ciddii wax ka sheegta la dagaallamayaan. Kolka ay sidaa yeelayaan waxa ay dhabarka ku hayaan oo hiil aan ka la reebbanayn ka haystaan kelitaliyaha oo ay isagana u ahaatay.
Kelitaliyaha waxa ay la noqotay kol haddii kacdoon bulsheed bilawday dantiisu in ay ku jirto in qabiilooyinka la ka la daadiyo. Maalintaas baa toban jaho loo ka la dareeray, dib dambena laba qof oo soomaaliyeed siyaasad isku ma ay afgaran, waayo nafsaddii la isku afgaran lahaa baa dhimatay. Halabuurkii iyo aqoonyahankii maalinta ay xun tahay loo irkan lahaa iyagana badankooda sidaas baa ku dhacday.
Dabadeed natiijadu waxa ay noqotay dawlad sheyddaan ku guuro oo dano gurracan lagu qunsado, iyo dadweyne sida kuul qubatay u ka la filqay.
Waayaha siyaasadeed ee soomaalida maanta haystaa halkaas ayuu horta ka soo ifbaxay. Sidaas ayay haddaba horta ku timid kooxdan laga qayliyay ee aynnu maqaalkii hore kaga hadallay ee Maxamed Siyaad Barre Xamar ku masruufi jiray, ee falkin jirtay dhagaraha lagu dilayo nafsadda bulshada laguna ka la qaybinayo.
Dad badan baan fiiro u lahayn sida xun ee loo jarjaray duntii xariirta ahayd ee ay sooheen waddaniyiintii ilbaxnimada cusub ee soomaalida horseeday (xagga tacliinta, fanka, maansada, saxaafadda, iyo fikirkaba). Waxqabadkii suubbanaa ee nimankaasi soomaalida cusub ku gardaadiyeen si ay ay dawladnimadu u noqoto hoy ummadeed oo la wada galo, waa la shiiqiyay wax silloon ayaana lagu dooriyay.
Haddii maanta la arkay soomaali iswada gumaadday, ka la qaxday, oo ka la irdhowday, oo wax walba ka la sheeganaysa, sababtu waa burburintii nafsadeed ee muddada dheer la waday, taas oo in badan oo ka mid ah loo adeegsaday suugaan iyo hidde la afduubay.
Dal waliba waxa uu lee yahay dad xilkoodu yahay isu ilaalinta iyo isku adkaynta bulshada iyo wacyigelinteeda togan. Dadkaasi waa ay ka awood badan yiihiin siyaasiga, waayo siyaasigu waxa uu matalaa dano xilliyaysan, laakiin iyagu waa damiirka iyo danta wadareed ee waartada ah.
Haddaba kooxdii qabyaaladeed ee Maxamed Siyaad Barre maalgashaday taa beddelkeeda waxa ay maleegtay tabo qarankii lagu doorinayo qabiil, oo wax allaale wixii dan ummadeed ahaa dan qolo loo rogayo. Halkaas ayay ka timid in hiddihii, suugaantii iyo taariikhdii la qaybiyo oo qolooyin lagu ammaano qolooyin kalena lagu maago. Suugaanta heerka qaran halkii ay ahaan lahayd agab lagu kobciyo dareenka wanaagsan iyo midnimada, waxaa laga dhigay wax lagu ka la didiyo oo la isku nacsiiyo. Sidaas ayay ku timid in xertii daraawiisheed la reereeyo, oo dhacdooyinkeedii loo qaybiyo xumaan tol ku jeedda iyo faanin tol kale u jeedda.
Fikirka sidaas ah mid ka gurracani ma jiro. Reeraha soomaaliyeed ee mashriq iyo maqrib geelashooda ku raacanayay maxaa ka galay Ina Cabdalle Xasan iyo dariiqadiisa Xijsaas laga soo waariday?
Maanta umadda soomaaliyeed ee iska celinaysa xagjirka al-Shabaab ma gaalaa? Dagaalkan in loo kaashaday Xabashi, Sawaaxili, Yugaandhiis, Burundi iyo jin iyo jaan, ma gaalo-raacnimaa? Haddii uu nin geeliisa iyo naftiisa ilaashanayay iska celinta Ina Cabdalle Xasan ku eedoobay, maxaa tan maantana loogu eedoobi waayay? Dabcan al-Shabaab waxaa la gashan kari waayay ujeeddo qabiil oo jacaylkooda loogu marmarsoodo. Malaha al-Shabaab waxa ay u baahan yihiin amiir kooxdan la hayb ah si ay u noqdaan wax ”dalka iyo diinta lagu difaacayo”.
Previous articleGuurkeeda wuxuu ka doortay geeri: Qiso qamuunyo leh oo si dhab ah u dhacday
Next article”Tani waa fadeexad!” – Denmark oo ku ceebaysan arrin ay kula keceen dalal Yurub ah iyagoo caawinaya Sirdoonka Maraykanka